ထိန်းချုပ်ထားသောပစ္စည်းဥစ္စာအက်ဥပဒေကဘာလဲ? | စစ်ဆေးမှု - ကုမ္ပဏီ | ဇန္နဝါရီလ 2022
ပြင်းထန်သောအားကစား ဆေးပညာသတင်း, ကျန်းမာရေးပညာရေး ကုမ္ပဏီ, သတင်း ကုမ္ပဏီ, အဆိုပါကုန်ပစ္စည်း ကျန်းမာရေးပညာရေး၊ ကုမ္ပဏီ, ကျန်းမာရေးပညာရေး နှိပ်ပါ မူးယစ်ဆေးဝါးသတင်း, သတင်း ကုမ္ပဏီသတင်း ကျန်းမာရေးပညာရေး မူးယစ်ဆေးဝါး သူငယ်ချင်း ကျန်းမာရေးပညာရေး၊ ကုမ္ပဏီ, မူးယစ်ဆေးဝါးအချက်အလက် ဆီးဂိမ်း ဖျော်ဖြေရေး
အဓိက >> ကုမ္ပဏီ >> ထိန်းချုပ်ထားသောပစ္စည်းဥစ္စာအက်ဥပဒေကဘာလဲ?
ထိန်းချုပ်သော ၀ တ္ထုများအက်ဥပဒေ (CSA) သည်ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စု၊ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၏မူးယစ်ဆေးဝါးဆိုင်ရာမူဝါဒဖြစ်ပြီး၊ အချို့သောပစ္စည်းများကိုထုတ်လုပ်ခြင်း၊ တင်သွင်းခြင်း၊ ပိုင်ဆိုင်ခြင်း၊ ၎င်းလက်အောက်တွင်တည်ဆဲဖက်ဒရယ်ဥပဒေအောက်တွင်တစ်နည်းနည်းဖြင့်စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်ထားသောအရာဝတ္ထုများကိုအချိန်ဇယားငါးခုထဲ၌ထည့်သည်။
ထိန်းချုပ်ထားသော ၀ တ္ထုများအက်ဥပဒေတွင်အဘယ်မူးယစ်ဆေးဝါးများပါသနည်း။
အချို့ဆေးညွှန်းဆေးများအပြင်တရားမဝင်ဆေးဝါးများသည် CSA ၏အစိတ်အပိုင်းဖြစ်သည်။ အလွဲသုံးစားမှုဖြစ်နိုင်ခြေမြင့်မားသောဆေးညွန်းဆေးများကိုဤရည်ရွယ်ချက်အတွက်ထည့်သွင်းထားသည်။ မူးယစ်ဆေးဝါးများကိုသူတို့၏အလွဲသုံးစားမှုအလားအလာ၊ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအသုံးချမှုများနှင့်ဘေးကင်းမှုပေါ် မူတည်၍ အစီအစဉ်ငါးခုခွဲထားသည်။ အရ မူးယစ်ဆေးဝါးစတင်အာဏာတည်သောအေဂျင်စီ (DEA) ၎င်းတို့ကိုအောက်ပါနည်းလမ်းများဖြင့်ခွဲခြားထားသည် -
ဇယား (၁) မူးယစ်ဆေးဝါး၊ ပစ္စည်းများ၊ ဓာတုပစ္စည်းများကိုလက်ရှိလက်ခံထားသောဆေးဝါးကုသမှုကိုအသုံးမပြုခြင်းနှင့်အလွဲသုံးစားလုပ်နိုင်သည့်အလားအလာရှိသောဆေးများအဖြစ်သတ်မှတ်သည်။ ဇယား ၁ ၏မူးယစ်ဆေးဝါးဥပမာများတွင်ဘိန်းဖြူ၊ lysergic acid diethylamide (LSD)၊ ဆေးခြောက် (ဆေးခြောက်)၊ ၃,4-methylenedioxymethamphetamine (ecstasy), methaqualone နှင့် peyote တို့ပါဝင်သည်။
ဇယား (၂) တွင်မူးယစ်ဆေးဝါး၊ ပစ္စည်းများသို့မဟုတ်ဓာတုပစ္စည်းများကိုအလွဲသုံးစားမှုအတွက်အလားအလာရှိသောမူးယစ်ဆေးဝါးများဖြစ်သည်။ ဒီဆေးတွေကိုအန္တရာယ်ရှိတယ်လို့လည်းယူဆတယ်။ ဇယား -၂ ၏မူးယစ်ဆေးဝါးနမူနာများမှာထုတ်ကုန်များပေါင်းစပ်ထားသောထုတ်ကုန်များဖြစ်သည်။ Vicodin ) ကိုကင်း၊ မက်သမ်ဖက်တမင်း၊ မက်သဒွန်၊ Dilaudid ), Meperidine ( Demerol ), oxycodone ( OxyContin ), fentanyl , Dexedrine , Adderall နှင့် Ritalin ။
ဇယား (၃) တွင်မူးယစ်ဆေးဝါး၊ ပစ္စည်းများ၊ ဓာတုပစ္စည်းများကိုရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှီခိုမှုအတွက်အလယ်အလတ်မှအနိမ့်ဆုံးသောဆေးဝါးများအဖြစ်သတ်မှတ်သည်။ ဇယား (၃) တွင်မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုသည်ဇယား ၁ နှင့်ဇယား ၂ ထက်လျော့နည်းသော်လည်းဇယား ၄ ထက် ပို၍ နည်းသည်။ ဇယား (၃) တွင်ဖော်ပြထားသောဆေးဝါးနမူနာများသည်သောက်သုံးသောယူနစ်တစ်ကီလိုဂရမ်အောက် ၉၀ မီလီဂရမ်အောက်ပါဝင်သောထုတ်ကုန်များဖြစ်သည်။ ketamine , anabolic steroids နှင့် testosterone ဟော်မုန်း ။
ဇယား (၄) တွင်မူးယစ်ဆေးဝါး၊ ပစ္စည်းများ၊ ဓာတုပစ္စည်းများကိုအလွဲသုံးစားမှုနှင့်မှီခိုမှုအန္တရာယ်နည်းပါးသောမူးယစ်ဆေးဝါးများအဖြစ်သတ်မှတ်သည်။ ဇယား -၄ မူးယစ်ဆေးဝါးနမူနာများမှာ Xanax , Soma , Valium , Ativan , ambien , ရသေ့တောင် ။
ဇယား ၅ တွင်ပါသောမူးယစ်ဆေးဝါးများ၊ ဓာတုပစ္စည်းများသို့မဟုတ်ဓာတုပစ္စည်းများကိုဇယား ၄ ထက် ပို၍ အလွဲသုံးစားပြုနိုင်သောအလားအလာရှိသောမူးယစ်ဆေးဝါးများအဖြစ်သတ်မှတ်ပြီးအချို့သောမူးယစ်ဆေးဝါးများပါဝင်သည့်ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုများပါဝင်သည်။ ဇယား (၅) ကိုမူးယစ်ဆေးဝါးများအားများသောအားဖြင့်ဆေးကြောခြင်း၊ ဇယား ၅ တွင်ပါသောမူးယစ်ဆေးဝါးနမူနာများတွင် Codeine 200 မီလီဂရမ်ထက်နည်းသော (၁၀၀) မီလီမီတာ (Robitussin AC) နှင့်အတူချောင်းဆိုးဆေးများပါ ၀ င်သည်။ Lomotil , တောင်ကြီးမြို့ , Lyrica , Parepectolin ။
အောက်တိုဘာ ၂၇ ရက်တွင်သမ္မတရစ်ချတ်နစ်ဆင်က CSA ကိုဥပဒေဖြင့်လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည်။ ၁၉၇၀ ပြည့်စုံသောမူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုတားဆီးရေးနှင့်ထိန်းချုပ်ရေးအက်ဥပဒေခေါင်းစဉ် ၂ အနေဖြင့် ၁၉၇၀ ခုနှစ်ထိန်းချုပ်ထားသောပစ္စည်းဥစ္စာအက်ဥပဒေအားအမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၏ ၉၁ ကြိမ်မြောက်ကွန်ဂရက်မှအတည်ပြုခဲ့သည်။
မည်သည့်မူးယစ်ဆေးဝါးများကိုထိန်းချုပ်ပစ္စည်းဥစ္စာအက်ဥပဒေတွင်ပါ ၀ င်သည်ကိုမည်သူဆုံးဖြတ်သနည်း။
အေဂျင်စီအတော်များများသည် CSA ရှိဆေးဝါးများသို့မဟုတ်ပစ္စည်းတစ်ခုအတွက်ဖြည့်စွက်ခြင်း၊ ဖျက်သိမ်းခြင်းသို့မဟုတ်အချိန်ဇယားပြောင်းလဲခြင်းကိုတောင်းဆိုနိုင်သည်။ ဤအေဂျင်စီများတွင် DEA၊ ကျန်းမာရေးနှင့်လူသား ၀ န်ဆောင်မှုဌာန (DHHS)၊ အစားအစာနှင့်ဆေးဝါးစီမံခန့်ခွဲမှု (FDA) သို့မဟုတ်အခြားပါတီများမှ DEA သို့အသနားခံခြင်းတို့ပါဝင်သည်။ ဒီနေရာမှာထိန်းချုပ်ထားတ္ထုများ၏စာရင်းအပြည့်အစုံ ။ ပြည်နယ်အေဂျင်စီများသည်၎င်းတို့၏ပြည်နယ်အတွင်းရှိပစ္စည်းများအတွက်ပိုမိုတင်းကြပ်သောအမျိုးအစားခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ အချို့သောပြည်နယ်များသည် ၄ ​​င်း၏ဖယ်ဒရယ်ခွဲခြားခြင်းကိုထိန်းချုပ်မှုမရှိသေးသော်လည်း Neurontin (gabapentin) ကိုထိန်းချုပ်ထားသောပစ္စည်းအဖြစ်ပြန်လည်သတ်မှတ်ခဲ့သည်။
လွန်ခဲ့သောနှစ်အနည်းငယ်အတွင်းအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုသည်ဆေးညွှန်းနှင့်ဆေးဝါးအလွန်အကျွံသောက်သုံးမှုကြောင့်သေဆုံးမှုများမကြုံစဖူးရှိခဲ့သည်။ ဤအသေဆုံးမှု၏အများစုတစ် ဦး ကနေခဲ့ကြသည် ဆေးညွှန်း opioid နာကျင်မှုသက်သာရာ အထူးသဖြင့် oxycodone, hydrocodone, or methadone ။ ပြည်နယ်အားလုံးနီးပါးသည်ဆေးညွှန်းအလွန်အကျွံသုံးစွဲသည့်ဆေးသေစေသည့်ကပ်ရောဂါတစ်ခုတည်းကြောင့်ထိခိုက်ခဲ့ရသည်မဟုတ်ပါ။ ရလဒ်အနေဖြင့်ပြည်နယ်အသီးသီးတွင်ဤထိန်းချုပ်ထားသောပစ္စည်းများနှင့် ပတ်သက်၍ ကွဲပြားခြားနားသောစည်းမျဉ်းများရှိသည်။ အထူးသဖြင့်မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးစားမှုနှင့်အလွဲသုံးစားမှုကိုကာကွယ်ရန်အတွက်အချိန်သို့မဟုတ်သောက်သုံးသောကန့်သတ်ချက်များသတ်မှတ်ခြင်း။
ပြည်နယ်များဘယ်လိုထိန်းညှိဘယ်လိုအနည်းငယ်ကွဲပြားသည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ တက္ကဆက်ပြည်နယ်သည်ဆရာဝန်အားဆေးညွှန်းကိုအကန့်အသတ်မရှိပြန်လည်ဖြည့်တင်းခြင်းကိုတားမြစ်သည်။ ဆေးညွှန်းပြန်ပေးသည့်အချိန်သည်ဆေးဝါးပေါ်မူတည်သည်။ ၎င်းသည်ဆေးညွှန်းရေးသည့် နေ့မှစ၍ ခြောက်လမှတစ်နှစ်အထိဖြစ်နိုင်သည်။ ထို့နောက်ဆေးညွှန်းသက်တမ်းတိုးရန်လူနာသည်သူတို့၏ဆရာဝန်ကိုထပ်မံဆက်သွယ်သင့်သည်။ အကယ်၍ အခြားအကြောင်းပြချက်များအနေဖြင့်ဆေးပမာဏအလွန်အကျွံသတ်မှတ်ထားသည်ကိုသူတို့ကစိုးရိမ်ပူပန်ပါကဆေးရောင်းသူသည်သင်၏စာရင်းသွင်းခြင်းကိုဖြည့်ရန်ငြင်းဆန်လိမ့်မည်။
သင့်ပြည်နယ်၏ကန့်သတ်ချက်များကိုစစ်ဆေးရန်၎င်းကိုသင်အသုံးပြုနိုင်သည် ရောဂါထိန်းချုပ်ရေးစင်တာ (CDC) ရည်ညွှန်းသည် တစ် ဦး အစမှတ်အဖြစ်။
ထိန်းချုပ်ထားသောပစ္စည်းများအတွက် SingleCare ကူပွန်
SingleCare ကူပွန်စာမျက်နှာအားလုံး၏ထိပ်မှာထိန်းချုပ်ထားတဲ့ပစ္စည်းတွေအတွက်သင့်ဆေးဟာဒီအမျိုးအစားထဲကိုဘယ်အချိန်ရောက်ပြီဆိုတာခွဲခြားသိနိုင်အောင်သတိပေးမှုတစ်ခုရှိပါတယ်။ ဆေးအသစ်တစ်ခုနှင့်ဆက်စပ်သောအန္တရာယ်များအကြောင်းသင်၏ဆရာ ၀ န်သို့မဟုတ်ဆေးဆိုင်သို့အမြဲတမ်းပြောပါ။
Valium vs. Ativan: ကွဲပြားခြားနားမှုများ၊ တူညီခြင်းနှင့်သင့်အတွက်ပိုကောင်းသည်
လိင်ဆက်ဆံပြီးနောက်bအစီအစဉ်သည်မည်မျှကြာအောင်လုပ်ဆောင်သနည်း